सुगर देखि नआत्तिनुहोस् ‘यसरी खाना खान जान्नुभयो भने नियन्त्रण हुन्छ’ डा‍. ज्योती भन्छिन् ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/जिबनशैली/सुगर देखि नआत्तिनुहोस् ‘यसरी खाना खान जान्नुभयो भने नियन्त्रण हुन्छ’ डा‍. ज्योती भन्छिन् !
5,5073minutes read
डा. ज्योतिका अनुसार यसको परिणाम असाध्यै राम्रो आएको छ। ‘हुन त यो हामीले शुरु गरेको एक महिना पनि भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर एक सातामै यसको परिणाम देखिन थालेको छ।’उहाँका अनुसार यो उपचारात्मक खाना उपचार विधि मोटोपन बढी भएका व्यक्तिहरूका लागि ल्याइएको हो। ‘जो व्यक्ति मोटा छन्, उहाँहरूलाई सुगर नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्ता व्यक्तिलाई दैनिक ८०० मात्र क्यालोरी भएको खानाको चार्ट दिन्छौँ’, डा. ज्योती भन्नुहुन्छ, ‘यसमा भात, रोटी, तरकारी र फलफूल सबै पर्छन्। तर क्यालोरी लिमिट भने क्रस गर्न पाइँदैन।’,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,